Otu esi eme njem site na motohome | Akụkọ njem
Otu esi eme njem site na motohome
Mariela Carril | | Atụmatụ, njem
Ọ dị gị n'aka iji ụgbọ ala mee njem? Nwee obi ụtọ na njem ahụ n'onwe gị, kwụsị na nnukwu ebe, bụrụ ụdị mbe ma ọ bụ eju na ezumike na ụlọ na-adọkpụ? Ọtụtụ ndị nwere ma ọ bụ nweela nrọ a, yabụ taa anyị ga-ekwu maka ya otu esi aga njem site na motohome.
Njem mbụ dị otú a nwere ike ịbụ njem na-amaghị ama, ya mere enwere ihe ole na ole ị ga-ama tupu ịmalite njem a dị egwu.
1 Ụgbọ ala na ndị njem
2 Otu esi eme njem site na motohome
3 Ndụmọdụ maka njem site na motohome
Ụgbọ ala na ndị njem
Ụlọ ụgbọ ala mbụ sitere na njedebe narị afọ nke XNUMX, mgbe njem ka nọ n'ịnyịnya, mana emesia, N'ihe dị ka 20 nke narị afọ na-esote, motohomes malitere ịpụta. Ndị nwere ike ịnwe ụgbọ ala ndị a bụ ndị bara ọgaranya n'ihi na a ga-eme ka ha nwee ịtụ ahịa. Ọ bụ ụlọ ọrụ America Campingcar bụ onye, ​​​​n'otu oge ahụ, na iji ụgbọ ala Ford dị ka ntọala, chere echiche nke mbụ motohome maka njem nlegharị anya.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị na aka na uto nke njem nlegharị anya ọgba aghara ọgbara ọhụrụ ha malitere ịpụta n’okporo ụzọ nke ụwa. Onye ọ bụla n'ime anyị nwere n'ezie Volkswagen Kombi n'uche, mana nke bụ eziokwu bụ na ụdị ndị ọzọ ewepụtala onwe ha na njem a nke ijikọta ụgbọ ala na ụlọ n'otu ụgbọ ala.
Taa, anyị na-anọgide na-ata ahụhụ Covidien-19 njem site motohome enweela ihe ndị a. N'ihi na? Ọfọn, ọ bụ ihe kacha mma mgbe ọ na-abịa nọgide na-elekọta mmadụ anya ma jikwaa ihe nke anyị na-ekerịta ihe ọ bụla.
Ime njem site na motohome bụ ezigbo njem na nnukwu ụzọ isi mata obodo anyị ma ọ bụ obodo anyị gbara agbata obi. Anyị na-ejikọta na ọdịdị, anyị na-achọpụta ebe ndị mara mma ma ọ bụ ndị na-adịghị ahụkebe nke anyị na-agaghị ama ma ọ bụghị, anyị na-apụ n'okporo ụzọ njem nleta, anyị na-emekwu ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụkwa na anyị na ụmụaka ma ọ bụ anụmanụ na-eme njem, ọ ka mma ka anyị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ ndị ọbịa na-arụrịta ụka.
Enwere usoro Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị tupu ịga njem Ya mere. Nke mbụ, Kedu ụdị ụgbọ ala m kwesịrị ịgbazite ma ọ bụ zụta? Ọ dabere na mmefu ego ị nwere yana nke ibu ibu ihe ị na-eche. Enwere obere ụgbọ ala ndị na-erughị kilo 750 na nke ụgbọ ala ma ọ bụ gwongworo na-eru 3.500 kilos. E nwekwara caravans nke ibu ibu na ibu bụ ihe ị kwesịrị iburu n'uche n'ihi na ọ dabere na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ndekọ gị, kedu ihe nyere ikike nke a.
Ọ bụrụ na echiche bụ inwe ụgbọ ala, jikọọ ya na ụgbọ ala gị wee pụọ mgbe na ebe ịchọrọ, mgbe ahụ nhọrọ kacha mma bụ njem nlegharị anya ọ bụghịkwa nke kwụ ọtọ. Static dị mma ma ọ bụrụ na ị na-aga otu ebe kwa afọ n'ihi na ụgbọ ala gị enweghị ike iburu ya. N'oge ịzụrụ, Eji ma ọ bụ nke ọhụrụ dabara adaba? Ajụjụ siri ike…
N'ozuzu, ndị bịara ọhụrụ na njem motohome na-ahọrọ otu eji dị ka azụrụ mbụ. Nwa dị ọnụ ala karịa ha na-akụzikwa ka ọ dị na-emefughị ​​nnukwu ego. Na kwa, na ụmụaka ma ọ bụ ụmụ anụmanụ ma ọ bụrụ na-eji ụgbọ ala na-aga ị gaghị enwe oke nrụgide nke imebi ma ọ bụ imebi ihe dị oke ọhụrụ. N'ezie, ọ dị mma ịlele ajụjụ ụfọdụ: kpachara anya na iru mmiri, A naghị eji ụgbọ ala ndị ahụ eme ihe n'afọ niile ka ha wee nwee ike ikpokọta iru mmiri ya mere ṅaa ntị nke ọma n'akụkụ ọnụ ụzọ, windo na elu ụlọ.
Ọ dịghịkwa njọ ịlele mkpọchi gbajiri agbaji na hụkwa na o zubeghị ohi. Ị maghị, karịsịa ma ọ bụrụ na ịzụtara ya n'aka nke abụọ n'aka onye na-ere ahịa nkeonwe. Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ ịnweta, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, akụkọ ihe mere eme nke oru ọrụ ugbo ala: breeki, moto, okwu eletrik na ndị ọzọ.
N'ikpeazụ,ihe bụ́ isi na-aghaghị inwe moto mbụ m? Ụlọ ịsa ahụ, ụlọ ịsa ahụ, stovu, ebe a na-esi nri, ebe a na-esi nri, friji, oven microwave, ebe nchekwa na n'etiti akwa abụọ na isii. Ozi a bara uru maka ma ndị njem m jikọtara n'ụgbọ ala na ụlọ moto.
Ndụmọdụ maka njem site na motohome
Ihe mbụ ị ga-atụle bụ nke ahụ Ịkwọ ụgbọ ala abụghị otu ịnya ụgbọ ala na-adọkpụ ụgbọala ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala. Enwere nkwụsi ike ọzọ, nkwụsị nkwụsị ọzọ, ụgbọ ala ahụ dị ogologo, dị elu ma dị arọ. Igwe ikuku na-emetụta ya nke ukwuu nke na-eme ka ọ ghara ịdị n'otu n'elu elu. Ọ na-erikwa mmanụ ọkụ karịa, yabụ ekwesịrị ịhazi ọsọ ọsọ. Ọ bụ ọtụtụ ozi ọhụrụ? Mgbe ahụ ị nwere ike ịga akwụkwọ mgbe niile.
Otu ndụmọdụ ọtụtụ ndị na-enye bụ na eNjem mbụ bụ ya na motohome/ caravan mgbazinye Ma mgbe ahụ ee, ọ bụrụ na ahụmahụ ahụ dị egwu na ịmara aka ka ihe dị, pụọ zụrụ nke gị. Ntinye ego ahụ dị mkpa, ọ bụghị naanị na ụgbọ ala n'onwe ya kamakwa na akụrụngwa ya: oche ndị ụlọikwuu, arịa kichin, batrị, ọkụ ọkụ, akwa na ọbụna ụtụ isi.
Mgbagwoju anya site na usoro nke moto na ugbo ala? Ha dị iche. Ụgbọ ala ahụ n'ozuzu bụ ụgbọ ala na-enweghị mkpali ya nke a na-ejikọta na ụgbọ ala, ebe ụgbọ ala bụ gwongworo a gbanwere ghọọ ụlọ moto. Maka njem mbụ dị otú a, onye ọ bụla na-akwado nhọrọ mbụ: ịghọ eju nke okporo ụzọ.
Ọnụ ọgụgụ nke motohome / caravan na-adabere na ezinụlọ na-eme njem. Ọ bụghị otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye gị karịa ma ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị na anụ ụlọ na-eme njem. E nwere nnukwu chic caravans na ndị ọzọ dị nnọọ mfe. Ọ dịkwa mma isonye na a klọb moto maka ndụmọdụ na nduzi banyere kpam kpam ihe niile metụtara ụwa a. Ozi a bara uru nke ukwuu n'ihi na ọ bụghị naanị ịkwakọba nri na ịgbanye mmanụ ọ bụla ọzọ.
Mgbe ị na-eme njem site na motohome enwere okwu ndị a ga-atụle dị ka ebe nchekwa mmiri ọṅụṅụ, Ebe ị ga-esi na-agbapụta mmiri eji eme ihe, otu esi ebufe gas, na igbe enyemaka mbụ, chemical ụlọ ịsa ahụ, nkwụnye nkwụnye, mapụtara wheel, tebụl na oche, ngwá ọrụ maka ma ụlọ na ụgbọ ala, electric okpomọkụ, TV, cutlery na efere, ngwa maka grill, akpụkpọ ụkwụ na-eje ije n'ime ụgbọ ala na-adịghị na-unyi, uwe aka na ọtụtụ, ọtụtụ ihe...
Na ihe niile dị njikere, ọ na-aga njem njem. Ma ozugbo ebe ahụ, ị ​​ga-ama na ị nweghị ike ịnya ụgbọ ala ebe ọ bụla. Enwere ebe ị mara ụlọikwuu maka ndị njem na akụrụngwa ga-abụ nke bara uru. Mgbe ahụ, ọ dị mma ime ntakịrị nyocha banyere ya ka emebere ihe niile. Nrọ, hazie ma kporie ndụ, nke ahụ bụ ihe ọ bụ. Jisie ike!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Otu esi eme njem site na motohome
Ihe ị ga-eme na obodo ochie nke Cuenca
Ihe ị ga-eme na Isla de Lobos